Imiceli mngeni ephambili yezokhenketho yaseYurophu ibonakalisiwe kwiQonga laseSlovenia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSlovenia eziziiNdaba » Imiceli mngeni ephambili yezokhenketho yaseYurophu ibonakalisiwe kwiQonga laseSlovenia
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • Iindaba zaseSlovenia eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Lixesha lokuba kulungiswe iziphene zeshishini lokhenketho nezithe zakhokelela kulwandiso kule minyaka ingama-50 idlulileyo kunye nokuguqula ezokhenketho zibe lushishino oluluhlaza kakhulu, lwedijithali nolubandakanya wonke umntu.
IBled Strategic Forum yinkomfa yezizwe ngezizwe kunye noMzantsi-Mpuma Yurophu.
Ubhubhane we-COVID-19 ubuze imibuzo emininzi kukhenketho.
Indima yokhenketho kwinqanaba le-EU kufuneka iqwalaselwe kwakhona.
IQonga leQhinga leBled liye lavela kwinkomfa yamazwe aphesheya kuMbindi nakuMzantsi-Mpuma Yurophu. Ushicilelo lwe-16 lwenzeka nge-31 ka-Agasti-2 kaSeptemba kwifom ye-hybrid. Iphaneli yokhenketho ebibanjwe ngomhla we-2 kuSeptemba idibanise iingcali eziphezulu ezivela eSlovenia nakumaziko adumileyo, kubandakanya i-EC, i-UNWTO, iWTTC, i-OECD, i-ETC, i-HOTREC, i-ECM, ukuxoxa ngekamva lezokhenketho (lwaseYurophu).
Iingcali ezibalaseleyo zamazwe kunye nezaseSlovenia, iindwendwe, iipaneli kunye nabameli bezokhenketho lwaseSlovenia kuthethwe nabo nguMphathiswa Wezophuhliso Lwezoqoqosho kunye neThekhinoloji uZdravko Počivalšek, uMlawuli-Jikelele kwiNtengiso yangaphakathi, kwiShishini, kuShishino kunye nakwiiSME kwiKhomishini yaseYurophu uKerstin Jorna, uMlawuli weSlovenia IBhodi yabakhenkethi MSc. Maja Pak, UMlawuli weSebe leNgingqi laseYurophu I-UNWTO UNjingalwazi Alessandra Priante kunye noMlawuli weBhodi yeSizwe yasePortugal kunye noMongameli IKhomishini yoKhenketho yaseYurophu (i-ETC) ULuis Araújo.
Ubhubhane we-COVID-19 ubuze imibuzo emininzi kwezokhenketho, phakathi kweyona nto icinezelayo kukusinda kunye nokubuyela kwimeko yesiqhelo, kunye nokutshintsha kweshishini lezokhenketho lube lolomeleleyo noluzinzileyo. Ngaphandle kwale meko inzima, uqikelelo oluqinisekileyo lwamaziko aphambili ezokhenketho kwilizwe liphela ayanda. Iphaneli yezokhenketho yalo nyaka ixoxe ngalo mbuzo Liza kuzisa ntoni ikamva kukhenketho lwaseYurophu.
Iiphaneli ziye zavuma ukuba ubhubhane lube nefuthe elikhulu kwicandelo lezokhenketho kwaye luneengxaki ezininzi, kunye namathuba. Lixesha lokuba kulungiswe iziphene zeshishini lokhenketho nezithe zakhokelela kulwandiso kule minyaka ingama-50 idlulileyo kunye nokuguqula ezokhenketho zibe lushishino oluluhlaza kakhulu, lwedijithali nolubandakanya wonke umntu. Izigqibo eziphambili ezichongiweyo kwiphaneli zezi:
Ukuzithemba kwabakhenkethi kuhambo kufuna ukwakhiwa kwakhona.
Iiprotokholi zokuhamba kunye nonxibelelwano kunye nolungelelwaniso phakathi kwamazwe angamaLungu malunga nezithintelo zohambo, iimvavanyo ze-COVID kunye nemithetho yokuchongwa kufuneka iphuculwe.
Imephu yendlela yotshintsho oluzinzileyo iyimfuneko.
Izalathi zentsebenzo ezintsha ziyafuneka.
Ukuguqulwa kwedijithali kweshishini lokhenketho kufuneka kuxhaswe kwaye kukhuthazwe.
Utyalomali kunye nolwabiwo lwenkxaso mali ye-EU kulondolozo kunye nokwenziwa kwedijithali kushishino lokhenketho kuyafuneka.
Utshintsho lwe-DMO kwindima yabo yokuququzelela inkqubo yotshintsho kushishino iye kwi-green, inclusive kunye nedijithali kufuneka ixhaswe.